Xasuus Qaran:- Qaar kamid ah Dadkii Noloshooda kuwaayay Qaraxii Isgoyska Soobe – XOGMAAL.COM
Hadaba Halkan hoose waxaan idinku suu gudbineynaa qaar kamid ah Dadkii ku dhintay Masiibadaasi oo aan la hadalnay Ehelkooda oo aan wax ka weydiinay Taariikhdooda
14 Oktober, 2017, gaari weyn oo xamuul ah oo lagu soo raray walxo qarxa oo tankoodu cuslaa oo uu kaxeynayay naftii halige ka tirsanaa Argagixsada Alshabaab ayaa lala beegsaday Isgoyska Zope ee KM 5 ee Muqdisho, oo ah waddo ganacsi oo ciriiri badan, waxa ayna taasi sababtay geerida Shacab badan oo aan waxba galabsan, oo ay ku jireen dad wadada goynayay, dad ka xoogsanayay ganacsiga waratada, looska iyo cadayga ku iibinayay hab socod wareeg ah, dad suuq-tag iyo wax iibsi ku jiray, arday da’ yar, arday jaamacadeed, dad ka cuntaynayay maqaayado, marti deganayd hoteello iyo dad ku tukanayay seddex masjid.
1- Duraan Abdi Xersi, waxa uu ahaa Sagaal iyo toban sano jir Arday ahaa, 2016 ayuu dhammeeyey waxbarashada heerka Dugisiga sare, isagoo ka baxay Dugisga Macmuur ee Magaaladda Muqdisho, waxa uu dhiganayey Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, Semister-ka koowaad ayuuna ahaa, waxa uu kamid ahaa Alle ha u naxariistee dadkii ku dhintay Xasuuqii ka dhacay Isgoyska Zoobe ee Magaaladda Muqdisho 14kii Oktoobar 2017-kii.
Fowziyo Cali Xasan oo la dhalatay Duraan, ayaa SONNA u sheegtay nolosha qoyska in saameyn weyn ay ku yeelatay geerida walaalkeed ku timid, iyaddoo xustay in uu ahaa qofka kaliya ee wax u bartay qoyska, islamarkaana la joogay waqtigii laga faa’iideysan lahaa noloshiisa iyo Cilmigii uu soo bartay.
2- Hooyo Shariifo Xuseen Raage, waxay aheyd garab rarato jirta 40 sano, iibinta caano ay dhabar keeda kusoo qaado ayey ku maareyn jirtay Nolosha Qoyskeeda oo ka koobnaa 6 qof oo Afar kamid ah ayey yihiin caruur aad u yar iyo Aabaha Qoyskaasi oo la jiifay xanuun uu muddo la daalaa dhacayey, Alle ha u naxariistee waxay ku dhimatay qaraxii 14ka Oktoobar ka dhacay Muqdisho.
Mid kamid ah Ehelka Qoyskaaga oo Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA la hadlay ayaa sheegay in Geerida Alle ha u naxariistee Hooyo Shariifo Qoykaasi saameyn xooggan ay ku yeelatay, maadaama ay aheyd qofka kaliya ee nolosha reerka uu ku tiirsanaa, una shaqeyn jirtay.
3- Maxamed Cabdulle Cabdi, waxa uu ahaa Curadka Qoys ka kooban 8 Qof oo 6 kamid ah ay gabdho yihiin, da’diisu waxay aheyd 35 sano jir, waxuuna ka shaqeynayey Dukaan ku yaalla Suuqa bakaaraha, waxa uu ahaa qofka kaliya ee uu ku tirsanaa qoyskaasi, isagoo waxbarashada ka bixin jiray caruurta ka yar, dadkii sida arxan darradda aheyd loogu laayey Isgooyska Ex Zoobe ayuu kamid ahaa, xilliga uu dhimaney ayaa waxa uu ka yimid aaska mid kamid ah Ehelkiisa oo geeriyooday, laguna aasay Deegaanka Tareedisho ee duleedka Muqdisho.
Nafiso Cabdulle Cabdi, waa currad ku xiggeenka Qoyska Maxamed, mar aan aan la hadalnay, waxay inoo sheegtay in saameyn weyn qoyska ay ku reebtay geerida Marxuum Maxamed Cabdulle, iyadda iyo walaalaha ka yar ayey sheegtay inay joojiyeen Waxbarashada, maadaama ay waayeen qofka ka bixiya Lacagta waxbarashada oo markii uu noolaa uu ka bixin jiray Alle ha u naxariistee Marxuum Maxamed Cabdulle Cabdi.
4-Cabdullaahi Ciise Yuusuf, waxuu ahaa 21 sano jir deganaa Degmadda Kaxda ee Gobolka Banaadir, waxa uu ahaa Xoogsato ka shaqeyn jiray agagaarka Isgooyska Zoobe ee Magaaladda Muqdisho, isagoo kamid noqday dadkii Nabad diidka Alshabaab ay ku laayeen Xasuuqii 14ka Oktoobar.
5-Xuseen Axmed Guuleed, waxuu ahaa 32 sano jir Xaasle ah oo ay u joogeyn Labo caruur ah, waxa uu ahaa Qofka kaliya ee u shaqeynayey Qoyskiisa oo ka kooban 10 ruux oo ay ku jiraan Hooyadiis iyo adeerkiis, oo la daala dhacaya xanuun sariirta saaray, waxa uu sidoo kale ahaa dhaqtar ka shaqeeynayey Isbitaalka Madiino, Xilli uu marayey isgooyska Zoobe, kana soo baxay Shaqadiisa islamarkaana kusii jeeday hoygiisa ayuu ku dhintay Xasuuq 14ka Okoobar ka dhacay.
Cabdullaahi Cali Faarax oo Marxuum Xuseen ay ilmo adeer yihiin ayaa inala wadaagay saameynta Qoyskaasi uu ku reebay geeridai Alle ha u naxariistee Xuseen Axmed Guuleed, isagoo sheegay in dadka aad uu u saameyey ay kamid yihiin hooyadiis iyo adeerkiis oo xaaladooda uu si gaar ah uu ula socday, hadana ay sariir la saaran yihiin xanuuno kala duwan.
6- Najmo Cumar Xasan Samatar waxay aheyd hooyo 24 sano jir heysatay 3 caruur oo aabahood ay kala tageen, waxay ku dhalatay Gobolka Gedo halkaasi oo dhowaan ay ka timid, si mutadawacnimo ah ayey ugu shaqeeneysay Ururka Haweenka Qaranka Soomaaliyeed.
C/naasir Maxamuud Maxamed oo Najmo ay ilma adeer yihiin, ayaa wakaaladda Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA u sheegay in ay aheyd qof naxariis badan, waxay u shaqeyn jirtay caruurteeda iyo qoyskeeda oo noloshooda ay ku tiirsaneyd, isagoo xusay inaysan jirin qof buuxin karta kaalinta ay ka baxday, saameynta ugu weyne ee reerka uu dareemayana ay tahay garabkii ay waayeen.
7-Ibraahim Axmed Cilmi oo ku magac dheeraa (Badal), waxa uu ahaa 40 sano jir ku dhashay Gobolka Galgaduud, kana shaqeyn jiray iibinta gawaarida yar yar, waxaa uu ahaa Xaasle heysta 8 caruur ah oo 5 kamid ah ay Wiilal yihiin, isagoo ka yimid goobtiisa shaqada kuna sii jeeday hooygiisa oo ku yaala deegaanka Ceelasha biyaha ayuu ku dhintay qaraxii ka dhacay isgooyska Zoobe ee Magaaladda Muqdisho.
Xaaskiisa oo lagu magacaabo Sacdiyo Axmed, ayaa inoo sheegtay inaysan jirin qof hadda reerka u dhaq dhaqaaqa, maadaama Marxuum Ibraahim uu ahaa Alle maahee qofka kaliya ee wax ka sugaan, haddana ay darreeymayaan darruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah.
8-Liibaan Maxamed, waa 32 sano jir Xamaalato ahaa waxuu lahaa xaas oo ay u heysay 9 caruur ah, waxay ahaayeen qoys iska dan yar ah, marxuumka ayaana u shaqeyn jiray, isaga iyo Nuur C/qaadir Abuukar oo isna aan wax shaqo ah heyn, da’diisuna lagu qiyaasay 45 oo wada socda ayaa waxay kamid noqdeen dadkii Maleeshiyada Nabad diidka ah ay ku laayeen Isgooyska Zoobe.
Axmed Abuukar Axmed oo asxaab dhow ay ahaayeen Liibaan iyo Nuur alle ha u wada naxariistee, ayaa SONNA u sheegay in geerada labadaasi marxuum ay ka dhalatay saameyn xooggan, isagoo xusay in ay ka tageen qoysas aad u dan yar ah, aana heysan qof u shaqeeya.
9-Maxamed Cabduqaadir Qaareey, Degmadda dharkiinleey ee Gobolka Banaadir ayuu ku dhashay sanadkii 1987, waxuu ahaa sama fale ka shaqeeya arrimaha gargaarka, isagoo ka shaqeynayey Ururka la yiraahdo Somali Blood oo ka shaqeeya tabarucaada dhanka dhiigga Bini-aadamka, waxa uu ahaa curadka qoykiisa iyo qofka kaliya ee qoyskaas ka tirsan ee dhammeeyey Waxbarashada heer Jaamacaddeed.
“Sama fale si weyn bulshada ay u taqaan ayuu ahaa, waxuu howlo gargaar u tagay qaar kamid ah Gobolada Dalka, Saameyn xanuun badan ayey nagu reebtay geeridiisa, qof curad ah oo wax bartay oo aabe uu ku tashanayey ayuu ahaa, waad darreemi kartaa xanuunkaas, aabe xittaa hadda wuu miir daboolmay, kama sheekeen karo” sidaasi waxaa SONNA u sheegtay Qadra Cabduqaadir Qaareey oo aan la hadlay.
10- Maryan Cabdullaahi Xuseen, waxay aheyd ardayad dhammeysay waxbarashada Jaamacadda heerka Koowaad, waxay isku diyaarineysay Qalinjabinteeda, balse ma suurta gelin, iyaddoo ka addeeganeysa carwo aan ka fogeyn Isgooyska Km5 Ex Zoobe, halkaasi oo ay ku dhimatay, kadib markii uu haleelay Qaraxii 14ka Oktoobar ee Muqdisho.
“Qoyskeyga aad ayuu uga naxay geerida walaasheey, gaar ahaan aabbaheen oo ka soo safray London, si uu uga qeybgalo qalinjabinteeda, balse xaqiiqda waxay noqotay inuu ka qeybgao aaskeeda”Anfac Cabdullaahi Xuseen oo marxuumada la dhalatay ayaa siddaasi nagu tiri.
11- Cumar Xaaji Maxamed, waa Naafo lixaadkiisu aanu dhameystirneyn, waxa uu Mehrad yar oo lagu iibiyo Bagaashka ku lahaa Isgooska Zoobe ee Magaaladda Muqdisho,Bashiir Cumar Xaaji iyo Maryan Cumar Xaaji oo isaga caawin jiray aya uga geeriyooday Qaraxii halkaasi ka dhacay.
Aabe Cumar Xaaji , ayaa sheegay in caruurta halkaasi uga dhimatay ay ahaayeen garbihiisa, uuna ku nasan jiray, waxaana uu xusay in Maryan Cumar ay meel aan siddaasi uga fogeyn ku iibin jirtay Caanaha. “Baariyaal ii dhaga fudud iyo hantideydii ayaa Zoobe ku waayey” ayuu yiri.
12- Xabiib Xasan Dhuux, waa 28 sano jir ka shaqeynayey mehrad aan ka fogeyn isgooyska Km5 Ex Zoobe, waa ahaa Xaasle caruur ay joogaan, sidoo kale waxuu ahaa qof la dhaqanka Bulshadda aad ugu wanaagsan, Alle ha u naxariisto marxuumka waxuu kamid ahaa dadkii ku dhintay xasuuqii 14 ka Oktoobar ka dhacay Muqdisho.
“Alle ha u naxariisto, ma aqaan qof aan ku tilmaamo afgaabni, Xushmad, Cibaado iyo howl karnimo ayuu isku darsaday, qoyskiisa saameyn xooggan ayaa soo gaartay, xaaska iyo ilmihiisa hadda ma heystaan qof booskiisa u badala” Qof deris muddo dheer ay ahaayeen ayaa siddaas noo sheegay.
13-Maxamed Cali Diiriye oo 23 sano jir ah, waxa uu si xamaalato ah uu uga shaqeysan jiray Magaaladda Muqdisho, lacagta aadka u yar ee dhibka badan uu ka soo maro waxa uu ku biili jiray Aabihii oo naafo ah iyo Qoyskiisa intiisa kale oo ka koobnaa 7 qof.
Mid kamid ah Eheladdiisa oo SONNA la hadlay ayaa u sheegay in Geerida Alle ha uu naxariistee Maxamed Cali ay qoyskiisa ku sababtay naxdin aad u weyn, isagoo xusay in aysan jirin cid hadda ay sugayaan Qoyska Marxuum Maxamed, maadaama isaga uu ahaa qof kaliya ee u shaqeeya.
14- Axmed Cabdi kariin Ciyoow, waxa uu kamid ahaa Qurbo joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareyanka, isagoo dalka ka maqnaa muddo 10 ku dhow, Bishii Oktoobar 2017 ayuu qorsheystay in dalka uu dib ugu soo laabto, si uu usoo booqdo Qoyskiisa, Qaraabadiisa iyo Asxaabtiisa Soomaaliya ku nool, markii uu soo gaaray Muqdisho isagoo aan arkin qoyskiisa, gaarinna halkii uu dagi lahaa ayaa waxa uu kamid noqday dadkii ku dhintay Qaraxii Zoobe ee Magaaladda muqdisho.
Marxuum Axmed Hooyadiisa, ayaa iyaddoo ooyneysa inoo sheegtay “Alla maxaan sheegaa, wiilkeeyga indho ma saarin 10 sano. markuu yimidna meydkiisa la ii keenay!”
15- Maxamed Cali Abuukar oo ku magac dheer (Qorshe), da’diisu waxaa lagu qiyaasay 53 sano jir deganaa Degmadda dharkiinleey ee Gobolka Banaadir, Wade u shaqeynayey Isbitaalka Xanaano ee Muqdisho ku yaalla ayuu ahaa, waxa uu ahaa Xaasle heysta 16 qof oo caruur iyo kuwa waayeen isugu jira, Alle ha u naxariistee dadkii ku dhintay Qaraxii zoobe ayuu kamid ahaa.
“Kama sheekeyn karro wixii dhacay, Aabe waxuu ahaa Qof gargaare oo ka shaqeeynayey Isbitalka Xanaano, Qof naxariis badan, farxaan ah, dadka qadariya intaas kusii darsaday cibaado badan ayuu ahaa” ayuu yiri mid ka mid ah Caruurta Marxuum Maxamed Cali oo lagu magacaabo C/qaadir Maxamed.
16-Cabdullaahi Maxamed Siidow 21 jir ka shaqeynayey mid kamid ah Maqaaxi aan siddaasi uga fogeyn Isgooyska Ex Zoobe ayuu ahaa, shaqaalaha kan ugu firfircoon, uguna dabeecada badan ayuu ahaa, sidoo kale Qoyskiisa qofka kaliya ee u shaqeeya ayuu ahaa, Alle ha u naxariistee Cabdullaahi dadkii Nabad diidka Kooxda Alshabaab ay ku xasuuqeen Isgooyka 14ka Oktoobar ayuu kamid noqday.
Mohamed Sidow oo dhalay Marxuum Cabdullaahi ayaa SONNA u sheegay in wiilkiisa ay fiirsan jireen, uuna ka caawin jiray inuu dabaro nolosha Qoyska, intaas waxuu raaciyey in Marxuumka uu ahaa Wiil baari ah oo dadka ay aad jecelaayeen.
17-Xaliimo daahir ducaalle, waxay aheyd hooyo Soomaaliyeed oo da’ ah Markii cid ugu war dambeesay meeshi uu Qaraxa ka dhacay ayey mareeysay,waxayna kamid aheyd dadkii maydkooda la waayay.
18- Cabdi Salaan Aadan Cabdi waxa uu ahaa 21 sano jir shaqeysta oo Nolosha reerkii ka masruufi jiray shaqo aad u adag oo ah Garab rarato ama Xoogsade, markii cid igu war dambeysay agagaarka isgooyska Ex Zoobe ayaa lagu Oggaa, Nolol iyo geeri midna laguma hayo.
Marxuumka adeerkiis oo lagu magacaabo Cali Cabdi oo degan degmadda Kaxda ee gobolka Banaadir, ayaa sheegay in wiilkooda uu kamid ahaa dadkii la waayay, balse ay u badinayeen inuu geeriyooday, waxaana uu xusay in Nolosha qoyska oo aad danyar u ahaa uu isagga kaliya u shaqeynayey.
19- Cabdullaahi Daahir Warsame waxuu ahaa 34 sano jir ku dhashay degmadda Ceel buur ee Gobolka Galgaduud, kuna shaqeyn jiray Xirfadda darawalnimada iyo Wade, waxuu deganaa degmadda Deyniile ee gobolka Banaadir, 6 Caruur ah oo qaarkood ay aad u yaryar yihiin ayaa u joogto,waxuuna kamid ahaa Dadkii meedkooda la waayay, waxaana cid ugu war dambeysay isaggoo ku sugan inta u dhaxeysa Isgooysyada Banaadir iyo Ex zoobe.
Mid kamid ah Ehelkiisa, ayaa Wakaaladda Wararka Qaranka ee SONNA u sheegay in Cabdullaahi ay isku raaceen inuu ku dhintay Xasuuqii 14ka Oktoobar ka dhacay Isgooyka KM5, maadaama xilligii qaraxa uu dhacayey halkaasi uu ku sugnaa, caruurtiisa inay dayacan yihiin oo aysan jirin qof ay sugayaan ALLE maahee ayuu noo sheegay.
20- Xuseen Axmed Guuleed, 27 sano jir ka shaqeynayey Isbitaalka Rasmi ayuu ahaa, waxuu ka shaqeynayey arrimaha caafimaadka oo la sheegay inuu ahaa qof aad u naxariis badan, dadkii ku dhintay Xasuuqii ka dhacay Isgooyska KM5 Ex Zoobe ayuu kamid noqday Alle ha u naxariistee marxuum Xuseen.
“waxuu ahaa sama fale naxariis badan oo inta badan caawiya dadka dan yar ah, walaahi geeridiisan saameyn iyo naxdin aad u xoog badan ayey nagu abuurtay, geeridiisa siddaan uga naxay uma maleyn maayo mid ka dambeysa in siddaasi oo kale ay ii xanuunjiso” mid kamid ah Ehelka Marxuum Xuseen ayaa inoo sheegay.
21-Aamino Xasan Cali:- waxay shidaal ku iibin jirtay isgooyska Ex Zope ee magaaladda Muqdisho, waxay aheyd hooyo ka masuul ah qoys ka kooban 9 caruur ah oo 4 ay gabdho yihiin, aabaha qoyskaasi ma aheyn qof shaqeeya, iyadda kaliya ayaa qoyskaasi oo aad u danyar ah u dhaqdhaqaaqayey, waxay kamid noqotay dadkii sida naxariista darran Nabad diidka Alshabaab ay ugu laayeen Qaraxii 14ka Oktoobar KM5 ka dhacay.
“Caruurta ay ka geeriyootay Marxuum Aamina hadda ma heystaan qof u maqan oo ay sugayaan, waa ilmo aad u yar, mar ay biilkooda raadiso iyo mar ay iyagga koriso ayey u dhaxeysay” mid kamid ah Ehelka marxuumada ayaa siddaasi inoo sheegtay.
22-Zeynab Cabdiqaadir Yacquub, waxay aheyd hooyo heysta carruur lagu qiyaasay shan qof, waxay ahaayeen qoys dan yar ah, hooyo Zeynab ayaana qoyskaasi u shaqeyn jirtay, isgooyska Zope ee Magaaladda Muqdisho qaraxii ka dhacay 14ka Oktoobar dadkii ku dhintay ayey ka mid aheyd.
Maxamed Cali oo ah ganacsatada loo yaqaano waratada ah, islamarkaana yaqaanay Marxuum Zeynab, ayaa Wakaaladda SONNA la hadlay, waxaana uu sheegay in ay aheyd Maamo Zeynab qof kaliya ee u shaqeynayey Qoyskooda oo ay heystay darruufo dhanka nolosha ah.
23-Marxuum Shuuke Xersi Maxamuud, waxuu ahaa Bajaajle ka shaqeysta Magaaladda Muqdisho, waxuu kamid ahaa dadkii Maleeshiyada Alshabaab ay ku xasuuqeen isgooyska Zope ee KM5.
Cali Maxamuud oo ay qaraabo yihiim Marxuum oo Wakaaladda SONNA ay la xiriirtay ayaa inoo sheegay in uu nala hadli karin, sababo la xiriira raadka ay ku reebtay geerida Marxuum Shuuke oo uu sheegay inuu ahaa qof naxariis badan.
24-Maxamed Bashiir Axmed, waxa uu ahaa wiil aad u da’yar oo da’diisa lagu sheegay 17 sano jir, Dugsi waxbaraso oo ku yaalla degmadda Wadajir ee Gobolka ayuu dhigan jiray, Alle ha u naxariistee waxuu kamid noqday dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay Isgooyka KM5 ee Magaaladda Muqdisho.
25-Suleymaan Nuur Cali oo ah 29 jir ku shaqeysanayey xirfadda darawalnimo , caan ayuu ka ahaa isgooyska Zope ee Magaaladda Muqdisho, maadaaa halkaasi uu u badnaa, dadkii nabad diidka 14kii Oktoobar Zope ay ku xasuuqeen ayuu kamid ahaa.
” Alle ha u naxariisto Suleymaan, waxuu ahaa qof shaqo badan oo howlkar ah agagaarka Zope si aad ah ayaa looga yaqaanaa, waxa uu lahaa caruur intay yihiin ma sheegi karo lkn waxaan hubbaa in qoyskiisa ay aad dan yar u yihiin oo isagga wax uu u keeno uun sugi jiray” Xuseen Cali oo marxuum ay shaqo wadaag ahaayeen ayaa siddaasi SONNA u sheegay
26-Leyla cabdi axmed, waxay aheyd Ganacsato iibisa Bakaashka noocyadiisa kala duwan, waxay u shaqeyn jirtay qoyskeeda oo dan yar ah, kuna nooleed Magaaladda garoowe ee xarunta maamulka Puntland, markii uu dhacayey qaraxii KM5 ka dhacay 14 kii Oktoobar, waxay ku sugneyd agagaarka isgooyska Zope, ilaa iyo haddana nolol iyo geeri laguma hayo.
Kheyrto Shiiq Barre oo waalid uu ah Leyla, ayaa SONNA u sheegtay in hooyada Marxuumada habeen kasta ay soo wacdo, iyaddoo weydiineysa su’aasha ah ” Gabadheyda meeydkeeda mala helay mise way nooshahay” Kheyrto, waxaa kale oo ay sheegtay Leyla cabdi in qoyska iyo hooyadeed oo da’ ah ay biili jirtay.
27-Maxamed Cali Diiriye, waxuu ahaa arday dhiganayey Jaamacadda Jobkey ee Magaaladda Muqdisho, Qoyskiisa waxay ka kooban yihiin 6 qof, hooyadiis oo lagu magacaabo Ruqiyo Cabdullaahi iyo aabihiis Cali Diiriye xanuun ayey la jiifeen, 4 wiil oo dhalatayna 3 kamid ah waa dhagool, isaga iyo wiil kale ayaa ugu dhaq dhaqaaq fiicnaa qoyskaasi, dadkii ku dhintay xasuuqii Zope ka dhacay ayuu kamid ah Alle ha u naxariistee Maxamed Cali Diiriye.
Marxuumka haboyartiis oo SONNA la hadashay, ayaa inoo sheegtay in Maxamed uu ahaa qofka kaliya ee reerka ay fiirsanayeen, “maaheyn qof shaqeynayey lkn qof wax bartay oo xilligii laga faa’iideysanayey joogay ayuu ahaa ” ayey tiri Faadumo Cabdi
28-Maxamed Bashiir Tifoow, waxa uu ahaa arday dhigta Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed, waxuu ahaa wiil wanaagsan oo furfuran, kuna fiicnaa dhanka waxbarashada, alle ha u naxariistee dadkii aan ku weynay isgooyska Zope ee Magaaladda Muqdisho ayuu kamid ahaa.
Sacdiyo Shiikh Cabdullaahi oo ah Marxuum Maxamed Hooyadiis ayaa Wakaaladda SONNA ku tiri :-
“Saameyn weyn ayey geeridiisa nagu beertay wiilkeyga Maxamed, waxuu iga dabari jiray ilmaha isaga ka yar oo agoon ah, habeenkii waxuu dib ugu akhrin jiray casharada ay soo qaateen maalintii, kama sheekeyn karo qof, waxuu ahaa wiil aan fiirsanayey oo baari ii ah” Hooyo
29-Cali Faarax Diiriye, waxuu ku magac dheeree oo dadka badankiis ay u yaqaaneen Cali Mahad, waxuu muddo badan u shaqeynayey Shirkadda Isgaarsiinta Nation ,aabe heysta 7 caruur ah oo 6 ay wiilal yihiin ayuu ahaa, sidoo kale waxuu heystay gabar 9 bilood jir ah, Alle ha u naxariistee dadkii Alshabaab ay ku xasuuqeen isgooyska Zope ee magaaladda Muqdsiho 14 kii Oktoobar ayuu kamid ahaa.
Nasiib Faarax diiriye, ayaa Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA u sheegtay in Marxum Cali Mahad uu qoyskiisa u ahaa garab ka nabad doon ah, geeridiisana ay ku yeelatay saameyn aad u xoog badan.
30-Mahad Maxamed Xasan, waxuu ahaa arday dhiganayey Jaamacadda Jaziira ee Magaaladda Muqdisho, Wuxu u socday marki ugu war dambeysay qosykiisa jaamacadda, waxaana uu u diyaar garoobayey buug difaacashadiisa, Alle ha u naxariistee waxuu kamid noqday dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay isgooyska Zope KM5 ee Magaaladda Muqdisho.
“Qof la fiirsanayo oo waxbarashada jaamacadda heer gabogabo ah ay u mareysay ayuu ahaa, waad darreemi kartaa saameynta ay reebi karto geeriddiisa, alle ha u naxariisto wixii uu ahaa kama sheekeyn karo” ayey Mahad gabar la dhalatay SONNA kala hadashay.
Dhageyso:- Duleedka Minnesota ayaa laga helay Meydadka Gabdho Soomaali ah